LEGO podcast တွင်စူးစမ်းလေ့လာသော big bang themes များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
17 / 09 / 2021 18 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 252 Views စာ0မှတ်ချက် Bits N 'အုတ်, Chima ၏ဒဏ္ာရီပုံများ, Lego, Lego ဂိမ်းများ, Lego NEXO Knights, Lego Ninjago, Lego Podcast တခုကို, ဂျော့ခ်ျ၏ဘဝ, Nexo Knights များ, Ninjago, podcast တခုကို
ဖန်တီးမှု Lego NEXO KNIGHTS အပါအ ၀ င်အဖွဲ့၏ big bang themes များသည် Bits N 'Bricks podcast ၏နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ၏အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
NEXO KNIGHTS မှ Monkie Kid, အ Lego အုပ်စုသည်၎င်းတို့၏သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်မာတီမီဒီယာပရောဂျက်များ၏မျှတသောဝေစုကိုမြင်ခဲ့ပြီး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောနာမည်ကြီးဘန်းတေးများ၊ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်မည်သို့ဆက်နွယ်သည်၊ Bits N 'Bricks ၏နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ၏အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
ရာသီသစ်၏တရားဝင်ဖြစ်သည် Lego Games podcast သည်ပဉ္စမမြောက်အပိုင်းနှင့် ဆက်၍ NEXO KNIGHTS နှင့်အခြားကြီးမားသောပရောဂျက်များတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကပါ ၀ င်သောဧည့်သည်များအားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအခမ်းအနားများနှင့် Ethan Vincent နှင့် Brian Crecente တို့နှင့် ၃၃ ကြိမ်မြောက်ဇာတ်လမ်းတွဲ
သတိမထားသူများအတွက် NEXO KNIGHTS သည်အခင်းအကျင်းကိုရရှိသည့်အတိုင်းမွမ်းမံထားသောပူးတွဲပါမိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုရရှိခဲ့သည် အသစ်အစုံမရ။ တီဗီရှိုးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ဤမာတီမီဒီယာများမည်သည့်ပလက်ဖောင်းများကိုဥပမာပေးသည် ideas ဖုံးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း၊ NEXO KNIGHTS ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်းအရာအားလုံးသည်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းအတော်လေးမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိသာထင်ရှားသည်။
“ ငါတို့ကအကောင်းဆုံးအဖွဲ့ကိုရွေးခဲ့ပေမယ့်သူတို့က NEXO KNIGHTS အတွက်ကွင်းတစ်ခုလုံးပြန်သွားရမယ်” ​​ဟု Mads Prahm ၏ထုတ်လုပ်ရေးဒါရိုက်တာကရှင်းပြသည်။ "ငါတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းချောချောမွေ့မွေ့မဖြစ်ခဲ့တာကငါတို့အတွက်နည်းနည်းတော့အံ့သြစရာကောင်းတယ်လို့ငါထင်တယ်"
“ စစ်သင်္ဘောများနှင့်မကင်းသောစက်ပြင်အချို့သည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံအတွက်အတော်လေးအရေးပါသောကြောင့်သူတို့ကစတန့်ကိုသွားခဲ့ရသည်art ခြစ်ရာမှ၊ သင်သိသည်၊ အချိန်ဇယားသည်အလွန်တိကျသည် Lego ဆောင်ပုဒ်သည်တိကျသောအချိန်၌ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ ”
ပရောဂျက်အတွက်မူရင်းဇာတ်ကြောင်းနှင့် Legends of Chima ကဲ့သို့အခြားကြီးမားသောအကြောင်းအရာများကိုနှိုင်းယှဉ်သည့်အခါအထက်ပါဇာတ်လမ်းတွဲအပြည့်အစုံကိုသင်နားထောင်နိုင်သည်။ Ninjago.
Bits N 'Bricks podcast ၏ယခင်ဇာတ်လမ်းတွဲများသည်ယခင်ကိုလည်းစူးစမ်းခဲ့သည် Lego စီမံကိန်းများအပါအ ၀ င် ဇီဝဗေဒ လူသိနည်းသည် ideas ကဲ့သို့ ဂျော့ခ်ျ၏ဘဝ.
← Lego အသစ် Star Wars World Builder ထံမှအကူအညီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘောင်းဘီတို
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Titan on Attack →